Toerana filokana an-tserasera afrikanina tatsimo - kaody Bonus Bonus amin'ny Internet
(423 vato, average: 5.00 avy tany 5)
I Afrika Atsimo dia iray amin'ireo faritra mahafinaritra indrindra ho an'ny mpiloka filokana. Saingy voafetra be izao ny filokana amin'ny aterineto ao amin'ny firenena, ary voarara ny fotoana fohy sy ny ankamaroany.
Top Casinos malaza amin'ny 5 ao Afrika Atsimo
Nandritra ny fandrarana henjana dia nilatsaka tao amin'ny 1992 ny filokana. Ny hany fanampiana ho an'ny orinasa dia navoaka tamin'ny 1994, raha ny governemanta vaovaon'i Afrika Atsimo dia nametraka fiovana amin'ny lalànan'ny filokana, mamaritra ny filokana amin'ny casinos mifototra amin'ny tany, ary koa ny fanatanjahantena ara-panatanjahan-tena sy ny fifaninanana amin'ny fifaninanana fifaninanana amin'ny aterineto. Ny fanitsiana dia tonga tao amin'ny 1996 ihany.
Na izany aza, androany ny Afrikana Tatsimo dia afaka milalao malalaka amin'ny tranokalan'ny vahiny ao amin'ny aterineto, na dia heverina ho tsy ara-dalàna aza izany. Maro ireo fikambanana an-tserasera, na dia eo aza ireo fandraràna, dia manohy manaiky ireo mpilalao avy any Afrika Atsimo, manome azy ireo ny fahafahana hilalao any amin'ny laharana Afrikana Atsimo (R).
Mitranga ny adihevitra momba ny fanitsiana ara-dalàna eo amin'ny ambaran'ny governemantan'i Afrika Atsimo. Azo antenaina fa mbola ara-dalàna ny casino amin'ny Internet. Vao haingana no nitatitra fa nanaiky hanome ny fahazoan-dàlana 10 ho an'ny casinos amin'ny aterineto ny governemanta ao amin'ny Repoblikan'i Afrika Atsimo. Ity dia dingana manan-danja ho an'ny fampandrosoana ny indostria ao amin'ny faritra. Na izany aza, mbola tsy ampiharina amin'izao fotoana izao ireo fahazoan-dàlana ireo.
Ny orinasa Slotegrator, izay manana traikefa be dia be toy ny mpamatsy sy mpanolotsaina ao amin'ny tsena filokana an-tserasera, dia nanao fanadihadiana an-tserasera momba ireo tranonkala filokana marobe indrindra avy any Afrika Atsimo. Noho izany, ireo manam-pahaizana dia nanamarika ny valin'ny 10 malaza indrindra amin'ny Afrikana Tatsimo any Afovoany.
Lisitry ny Top Sites 10 Africa Online Casino Sites
Ny asa filokana any Afrika atsimo dia avela nanomboka ny taona 1994. Ny karazana filokana rehetra dia ara-dalàna, afa-tsy ny sehatra an-tserasera. Ny filokana sy filokana amin'ny hazakaza-tsoavaly ihany no avela an-tserasera. Kasino mihoatra ny 40 no miasa any Afrika Atsimo. Ny trano filokana betsaka indrindra dia ao Johannesburg, faritanin'i Gauteng. Misy trano filokana 4 lehibe, izay miaraka miaraka misy latabatra mihoatra ny 180 ho an'ny lalao karatra, milina slot mihoatra ny 5,200 ary poker video.
Loharanon-tsary: ​​News of Gambling
Ny casino lehibe indrindra GrandWest Casino & Entertainment World dia any Cape Town. Misy latabatra 79 ho an'ny lalao, latabatra poker 10, milina slot mihoatra ny 2500 ary poker video.
Ny marika malaza indrindra amin'ireo sarimihetsika afrikana tatsimo:
Tsogo Sun mitazona lisansa 14;
Sun International - fahazoan-dàlana 13;
Peermont Global - fahazoan-dàlana 8;
London Clubs International - fahazoan-dàlana 1;
Ny vola miditra amin'ny filokana any Afrika atsimo dia mitoetra eo ihany ary refesina amina miliara afrika atsimo. Ho an'ny tetibola 2015-2016, ny vola miditra amin'ny orinasa filokana ara-dalàna dia nitentina ZAR 26.3 miliara na USD 1.86 miliara. Ny vola miditra lehibe indrindra dia entin'ny casino - 70.5% amin'ny fidiram-bola lehibe.
Mandritra izany fotoana izany dia mandray anjara amin'ny loteria nasionaly ny ankamaroan'ny mpilalao - 78.9%. 10.6% ihany no milalao ao amin'ny casino. Ny telo ampahefatry ny mponina dia nandray anjara tamin'ny filokana rehetra. Ny antsasaky ny mponina dia mihevitra ny filokana na filokana ho fomba mendrika handaminana fialamboly.
Famaritana fohy momba an'i Afrika Atsimo
I Afrika atsimo dia ny Repoblikan'i Afrika atsimo, repoblika parlemantera any atsimon'i Afrika. Io no firenena mandroso indrindra amin'ny kaontinanta ary ny fanjakana afrikana tokana amin'ny G20 (ny "Twenty roapolo").
Manaiky ny tenim-panjakana 11 ny firenena, manana olona fotsy, aziatika ary mainty izy. Ny voalohany nanjanaka ny Holandey tamin'ny taona 1652. I Afrika atsimo dia nanana lasa lasa manan-karena - tamin'ny taonjato faha-19 dia niady ho an'ny diamondra sy volamena ny ady Anglo-Boer tamin'ny taonjato faha-20, nisy apartheid lava. Izany rehetra izany dia namela soritra amin'ny fepetra fampandrosoana ny orinasa, toekarena ary fiaraha-monina.
Ny vola dia ny andrefana atsimo afrikanina, nomen'ny ZAR na ny R. Ny tahan'ny volana Desambra 2016 dia USD 0.0709 ho an'ny ZAR 1 na ZAR 14.1 ho an'ny USD 1.
Ny firenena dia manondrana diamondra, volamena, platinum, milina ary fitaovana amin'ny ankapobeny. Import - solika sy vokatra. Mitana ny laharana faha-39 i Afrika Atsimo amin'ny laharam-pahamehan'ny firenena ahafahany manao orinasa.
Tantaran'ny filokana ao Afrika Atsimo
Ny orinasa filokana any Afrika Atsimo dia voarara hatramin'ny taona 1994. Ny lalàna, nantsoina hoe ny lalàna mifehy ny filokana any Afrika atsimo, natsangana tamin'ny taona 1965, dia nandrara ny karazan-pilokana rehetra, afa-tsy ny hazakaza-tsoavaly. Nekena ho fanatanjahantena izy ireo.
Ny casino tsy ara-dalàna dia nanomboka niforona hatramin'ny faran'ny taona 1970. Niasa tao amin'ny bantustans Boputatsvan, Siskey, Transkei, Venda izy ireo.
Bantustans - tranga miavaka amin'ny tantaran'i Afrika Atsimo. Somary mitovy amin'ny famandrihana any Etazonia izy ireo, saingy manana ny mampiavaka azy. Io no faritany izay nampiasaina ho tahiry ho an'ireo mponina mainty hoditra any Afrika Atsimo. Nahazo fahaleovan-tena ny bantustans sasany, ary nahafahana nanangana orinasa filokana. Ohatra, tao Bophuthatswane dia nanangana tanàna-tanàna Sun City.
Ny foko afrikanina tatsimo ihany no afaka miaina amin'ny bantustans, ary ny ankamaroan'ny olom-pirenena dia tsy afaka niditra ara-dalàna tamin'ireo andrim-panjakana ireo. Na izany aza, tamin'ny 1995 dia nisy kasino teo amin'ny 2000 teo amin'ny firenena.
Rehefa nifarana tamin'ny taona 1994 ny apartheid, ary tonga teo amin'ny fitondrana demokratika, dia voavaha avokoa ny karazana filokana. Ny lalàna mifehy ny filokana nasionaly, izay navoaka tamin'ny taona 1996, dia nankato ny rafitra fahazoan-dàlana amin'ny casino sy ny loteria ho an'ny fanjakana. Ny hazakaza-tsoavaly dia fantatra indray fa karazana filokana.
Lalao filokana any Afrika Atsimo
Ny fetran'ny taona ho an'ny mpilalao Afrika Atsimo dia 18 taona. Tsy manan-jo hilalao amin'ny trano filokana ny zaza tsy ampy taona.
Misy hetsika telo mamaritra ny rafitra ara-dalàna amin'ny filokana ao Afrika Atsimo:
Lalànan'ny firenena filokana amin'ny 1996;
Lalàna filokana nasionaly 2004 - mameno ny teo aloha;
Ny lalàna amam-panitsiana ny lalao nasionaly 2008, izay mamaritra ny toeran'ny orinasa mpiloka an-tserasera.
Ny lalàna mifehy ny filokana nasionaly tamin'ny taona 1996 dia mamaritra mazava ny fomba tokony hizarana ny fahazoan-dàlana casino eo anelanelan'ny faritany ao amin'ilay firenena. 40 ny isan'ny fahazoan-dàlana. Nozaraina toy izao izy ireo:
Faritany Andrefana-Cape (afovoany - Cape Town) - fahazoan-dàlana 5;
Faritanin'i North-Cape (Kimberley) - 3;
Faritany Atsinanana-Cape (Bisho) - 5;
Faritany Avaratra-Andrefana (Mafeking) - fahazoan-dàlana 5;
Limpopo na Faritany Avaratra (Polokwane) - fahazoan-dàlana 3.
Araka io hetsika io, tsy misy olona (fikambanana na olona) manana zo hihazona mihoatra noho ny lisansa 16 ao amin'ny firenena na mihoatra noho ny lisansa 2 ao amin'ny faritany iray samihafa.
Manazava ny lalàna nasionaly momba ny filokana:
Ny fiteny grika taloha;
izay heverina ho filalaovana;
ny fomba fiasan'ny Birao Nasionaly Gambling.
Mpanafika filokana any Afrika Atsimo
Birao nasionaly filokana - ny mpandrindra ny filokana ao Afrika Atsimo. Ny andraikitry ny mpandrindra dia misy:
mamaritra ny fitsipika napetraky ny orinasa filokana;
tompon'andraikitra amin'ny fitantanana ny filokana.
The Biraon'ny Afrikana Afrikana Tatsimo dia tompon'andraikitra amin'ny fanamarinana, ny fitsapana, ny fanadihadiana, ny kalibration ary ny fanamarinana ny milina fanatanjahantena, ny rafitra fanaraha-maso elektronika ary ny fitaovana hafa an'ny casino.
Fikambanan'ny Casino Casino Atsimo
Misy mpilalao hafa ao amin'ny orinasa filokana any Afrika atsimo - ny Casino Association of South Africa (CASA). Niorina tamin'ny 2003 ny fikambanana. Ny lahasa lehibe ao amin'ny fikambanana:
mampiofana mpihazakazaka casino sy tomponandraikitra;
manome fampahalalana bebe kokoa momba ny casino amin'ny vahoaka;
mba hahazoana fahatakarana bebe kokoa sy mangarahara amin'ny fandraharahana filokana.
Mampivondrona saika ny trano filokana rehetra ao amin'ny firenena ny fikambanana. Ny solontenan'ny governemanta dia mihazona 37% ny anjaran'ny trano filokana an-tanety isan-karazany. Ny mpikambana ao amin'ny fikambanana dia manome asa maherin'ny 100,000.
Lalànan'ny filokana amin'ny aterineto any Afrika Atsimo
Ny lalàna momba ny fanitsiana ny filokana nasionaly tamin'ny taona 2008, izay tsy mbola vita hatramin'ny farany, dia manaiky fa tsy ara-dalàna ny asa filokana amin'ny Internet any Afrika atsimo. Tsy ara-dalàna ihany koa ny fandaminana ny filokana amin'ny Internet, sy ny fandraisana anjara amin'izany. Ampahany - satria tsy ny karazana filokana amin'ny Internet no voarara.
Mandrara ny antsoina hoe “lalao fifaneraserana” ny lalàna:
Fanamboarana fanatanjahan-tena amin'ny aterineto
Fanomezana on horse racing online;
ary amin'ny ankapobeny ny raharahan'ny mpamaky boky. Mazava ho azy fa ny mpikarakara ny BC dia tokony hanana fahazoan-dàlana avy amin'ny governemanta.
Ny lohahevitra, na ny mpikarakara tranonkala iray na banky mitarika fifanakalozana filokana amin'ny Internet, dia saziana amin'ny sazy R 10 tapitrisa (USD 709 arivo) sy / na 10 taona amn'ny fonja.
Na izany aza, tsy manome sazy ny mpilalao tsirairay ny lalàna. Avy amin'izany dia manaraka fa afaka milalao ao amin'ny casino ny mpilalao, apetraka any ivelany ny mpizara azy.
Karazana filokana any Afrika Atsimo
Ny Biraom-pokonolona Nasionaly dia mitarika an'ity lisitry ny filokana ho an'ny kaontiny ity:
casino - lalao sy filokana amin'ny birao;
latsaky ny fifaninanana sy ny fanatanjahan-tena, izay atolotra amin'ny mpanao bokim-bola sy ny fako;
milina miaraka amin'ny marika sy loka voafetra -Limited Payout Machines (LPM);
Bingo - nentim-paharazana sy tamin'ny endriny elektronika (Electronic Bingo Terminals, EBT).
Ny casinos afrikana Tatsimo dia manolotra karazan-tsarimihetsika karazany maro, izay tsy mitovy amin'ny Eoropeana, fa koa ho an'ny kontinanta afrikana Tatsimo.
Ohatra, any Cape Town lalao malaza be dia ny klawerjas (klawerjas) - lalao taloha Holandey misy kolikoly, mbola malaza any Netherlands izy io. Ny tanjona dia ny fanangonana ny isa betsaka indrindra amin'ny tsolotra.
Ny lalao Kaluka (kalookie) - karazan-tsarimihetsika iray. Ny tanjona dia ny fampiantsoana fitambarana sasany.
Thuni (Thuni na Thunee) dia lalao mahazatra an'i Afrika atsimo. Amin'ny ankapobeny, malaza amin'ny Aziatika izy io. Ny fitsipiky ny lalao dia mitaky anao isa isa maromaro ihany koa.
Lalao maro izay malaza any Afrika Atsimo:
cribbage dia lalao karatra anglisy;
canasta (canasta) - karazana rhammi;
samba (samba) - karazana lakandrano;
skat (skat) - lalao kolikoly avy any Alemana;
saka sy totozy (na dia eo aza ny Malice) - endrika areti-pady mifaninana;
shithead (shithead) - ny lalao noho ny fahaverezan'ny karatra rehetra.
Ny vola azo avy amin'ny banky filokana any Afrika Atsimo
Ho an'ny fandaniana ara-bola 2015-2016 avy amin'ny orinasa mpiloka ara-dalàna dia nahatratra ZAR 26.3 miliara na USD 1.86 miliara.
Ny vola miditra lehibe indrindra dia entin'ny casino - 70.5% amin'ny vola miditra na USD 1.3 miliara;
aorian'izy ireo dia misy taha - 16.9% na 315 tapitrisa USD;
avy eo LPM (Masinina fandoavam-bola voafetra, milina tsy manam-bola aloa) - 9.0% na USD 167 tapitrisa;
amin'ny bingo fahaefatra - 3.6% amin'ny vola miditra na USD 66 tapitrisa.
Ny governemanta dia miteraka karazan-tsolika avoakan'ny filokana:
Ny indostrian'ny filokana ao amin'ny faritanin'i Gauteng dia mahazo indrindra - 40% na 745 tapitrisa dolara amin'ny fiscal 2015-2016;
Ny toerana faharoa dia an'ny Faritany Andrefana -15.6% na USD 291 tapitrisa;
ny toerana fahatelo dia nalain'i KwaZulu-Natal - 18.5% na 344 tapitrisa USD.
Gauteng dia mamokatra fidiram-bola avo indrindra amin'ny trano filokana, tsatoka ary bingo. Ny fidiram-bola avo indrindra amin'ny sehatry ny LPM dia raisin'ny faritany Andrefana-Cape - 30%.
Ny isan'ireo milina fantsom-pifandraisana ao amin'ireo trano filokana miorina amin'ny tanin'i Afrika Atsimo tamin'ny 2015 dia 23,415. Vola azo avy amin'ny slot - $ 969 tapitrisa
Ny isan'ny latabatra tamin'ny taona 2015 tao amin'ireo trano filokana rehetra tao amin'ny firenena dia sombiny 932. Ny vola miditra amin'izy ireo dia 237 tapitrisa USD.
Fitsinjovana ny filokana ao Afrika Atsimo
Tombanana an-tapitrisany dolara koa ny fanesorana ny tetibolam-panjakana. Tamin'ny 2015, nahazo alalana 262 tapitrisa dolara tamin'ny orinasa filokana ny manampahefana afrikanina tatsimo. Izany dia mandrafitra ny 28% amin'ny vola miditra amin'ny orinasa filokana.
Fanavotanam-bola no ahitana karama telo:
Ny hetra amin'ny orinasa dia angonina avy amin'ny orinasa. Ny sandany dia miankina amin'ny fidiram-bolan'ny orinasa;
hetra filokana - dia nangonin'ny tompon'andraikitra amin'ny faritany. Ny sanda dia mikajiana araka ny karama faratampon'ireo manana fahazoan-dàlana;
haba ampidirina soatoavina - no isaina amin'ny alàlan'ny sanda ampiana isaky ny dingana famokarana sy fifanakalozana entana sy serivisy. Ampangaina amin'ny casino ihany koa izy io fa tsy amin'ny mpilalao.
Fitantanam-bola miloka an-tserasera amin'ny aterineto any Afrika Atsimo
Na eo aza ny zava-misy fa voarara ny filokana amin'ny Internet any Afrika atsimo, ny mpilalao rehetra mihitsy dia afaka mampiasa ny serivisy amin'ny filokana iraisam-pirenena. Ny mpilalao dia afaka mampiasa vola amin'ny vola eo an-toerana izay manamora ny serivisy. Saingy misy nuansa iray: manomboka amin'ny 4 Oktobra 2016, azon'ny manampahefana atao ny maka ny fandresen'ny mpilalao an-tserasera. Ny departemantan'ny varotra sy ny indostria dia namoaka fanitsiana vaovao momba ny volavolan-dalàna fanitsiana ny filokana nasionaly, arak'izany, zon'ny fitsarana ny maka an-keriny sy mitazona ny fandresen'ny mpilalao.
Afaka milalao an-tserasera araka izany ianao - saingy tsy ny zava-misy fa afaka mahazo ny fandresenao ianao, satria na ny fifampiraharahana ao amin'ny firenena aza dia voarara.
Manaova banky an-tserasera
Voararan'ny lalàna ny lalao kilalao an-tserasera sy bingo ary loteria tsy nahazo alalana tamin'ny taona 2010, rehefa noraran'ny fitsarana faritany Gauteng ny casino an-tserasera Swaziland Base Pigg Peak. Ny precedent dia noforonina, ary nanomboka teo dia voarara tanteraka ny trano filokana an-tserasera rehetra.
Olona telo ihany amin'ny filokana an-tserasera ihany no ara-dalàna:
sehatra an-tserasera amin'ny loka nasionaly;
Ny zavatra hafa rehetra dia tafiditra ao amin'ilay antsoina hoe "tsena volondavenona". Mbola ho hita eo raha hanohy handinika ny fananganana ara-dalàna ny asa an-tserasera ny governemanta na tsia.
Bill Bill Remote Bill
Fotoana fohy dia noresahana ilay volavolan-dalàna Remote Gambling bill, izay afaka mamela ny filokana amin'ny aterineto any Afrika Atsimo.
Ny bill Bill Remote Gambling dia nieritreritra hoe:
ny habetsaky ny valisoa sy ny loka;
ny andraikitry ny faritany sy ny Birao Nasionaly;
ny fitsipika momba ny fitaovana kazàny amin'ny aterineto;
olana mikasika ny fiarovana ny zon'ny mpilalao.
Asio, ohatra, ireto fetra manaraka ireto:
tsy mandrara ny kilalao tsy ampy taona;
tsy mandrara ny fampindramana ny mpilalao;
dia nametra ny fetran'ny dokam-barotra sy ny fampirantiana kakazo amin'ny aterineto.
Tamin'ny volana 2016 dia nolavina ny volavolan-dalàna momba ny fandaharam-potoana Remote Gambling.
Ny solontenan'ny Departemantan'ny varotra sy ny indostria, izay miresaka momba ny indostrian'ny fialam-boly, dia mino fa ny volavolan-dalàna dia manintona tsy fahampian'ny fiatrehana ny olana ara-tsosialy mifandraika amin'ny filokana amin'ny aterineto.
Raha noraisina ny volavolan-dalàna tamin'ny volana 27 2016, mpikambana iray ao amin'ny Antoko Nasionaly Fanafahana Shaik Emam (Shaik Emam) nandresy noho ny tsy nanaiky ilay volavolan-dalàna:
"Potika ny asan'ny olon-tsotra satria avelan'izy ireo hanidy ny fatiantoka fotsy ny karamany fotsy."
Ireo no fihetseham-po ankapobeny ao amin'ny governemanta. Raha ny tena izy, misy toerana faran'izay matanjaka ao amin'ny trano filokana monina an-tanety izay tsy tia ny zava-misy fa mitaky mpandray anjara bebe kokoa amin'izy ireo ny tranonkala. Ny mpanohitra ny volavolan-dalàna dia voamarina, ohatra, ho an'ny orinasa an-tserasera any Eropa: tranokala voafidy efa ho 20% no nofidina ho an'ny casino ivelan'ny Internet.
Ny mpanohana ny volavolan-dalàna sy ny solontenan'ny Democratic Alliance, Geordin Hill-Lewis (Geordin Hill-Lewis) dia mihevitra fa fahadisoana izany:
“Ny lalàna mifehy ny indostria no fomba tsara indrindra hiarovana ny vahoaka. Ny lalàna fanitsiana ny filokana nasionaly 2008 dia mbola tsy nekena hatreto. Noho io antony io dia iharan'ny fisavoritahana ny filokana amin'ny Internet. "
Mpanohana ny fampanarahana ara-dalàna ny asa aman-draharaha amin'ny Internet sy ny tohan-kevitra toy izany: very vola marobe an-tapitrisany ny governemanta, tsy manara-dalàna ny tranokala Internet. Ny Association of Casinos of South Africa (Casino Association of SA) dia mitanisa isa toy izany:
“Very eo amin'ny 110 tapitrisa dolara (7.8 tapitrisa dolara) ny firenena amin'ny trano filokana tsy ara-dalàna amin'ny Internet. Mandritra izany fotoana izany, ny politika mahery setra ataon'ny trano filokana an-tserasera dia mahatonga ny andrim-panjakana very vola. Nihena 0.6% ny tombom-barotra. "
Amin'izao fotoana izao, ny olana amin'ny orinasa an-tserasera dia mbola tsy voavaha. "
Sarimihetsika tsara indrindra ho an'i Afrika Atsimo
Ity ambany ity ny lisitr'ireo casinos amin'ny aterineto izay ahafahan'ny interface avec Africains avec les équipements:
Masinina fiara an-tserasera amin'ny casinos afrikana tatsimo
Ireo sarimihetsika Afrikana Tatsimo dia manolotra sarimihetsika fohy amina horonantsary malaza ao amin'ny aterineto:
Jackpot an'ny olon-drehetra;
Sarimihetsika filokana ao Afrika Atsimo
Araka ny filankevitry ny filokana nasionaly ao amin'ny 2016, ny 15.3% an'ny mponina dia mitongilana foana.
Nandritra ny dimy taona dia nisy fihenan'ny isan'ny mpilalao ao amin'ny sehatry ny casino, bingo, filokana ary LPM. Fa nitombo ny fividianana tapakila amin'ny loteria ho an'ny fanjakana.
Ohatra, tamin'ny Aprily 2015, dia najanona ireto antontan'isa manaraka ireto:
Ny mpividy 78.9% dia mividy tapakila lottery;
Ny 11.2% play play-scratch-cards;
10.6% - ao amin'ny casino;
7.1% - loteria tsy miankina;
6.2% - hazakaza-tsoavaly sy filokana amin'ny fanatanjahan-tena;
0,4% - bingo;
Ny 17.5% dia tafiditra amin'ny filokana tsy ara-dalàna.
Ny lalao filokana tsy ara-dalàna dia ekena amin'ny andrim-panjakana tsy manana fahazoan-dàlana sy trano filokana an-tserasera. Marihina fa tato anatin'ny taona vitsivitsy dia nihena ny mpandray anjara amin'ny filokana tsy ara-dalàna. Tamin'ny Novambra 2012, 41% ny mpilalao nilalao tsy ara-dalàna. Amin'izao 2015-2016 izao - 17.5% fotsiny.
Ny filokana dia ekena fa 9.9% fotsiny amin'ny isan'ny mpilalao rehetra. Nisy mainty maro kokoa nanomboka nilalao -19.8% tamin'ny 2015-2016. Ny isan'ny mpilalao, izay 25 taona ny taonany, dia mitombo.
Online Casino Aostralia
Tsy mora ny mifidy ny casino an-tserasera tsara indrindra atolotra any Aostralia. Hatramin'izao fotoana izao dia tonga tao an-tsenan'ity firenena tsy mampino ity ireo mpamorona rindrambaiko filokana an-tserasera dia lasa mahery vaika tokoa ny fifaninanana eo amin'ny sehatra. Izany no antony nandanianay nandritra ny ora maro nilalao ny blackjack, roulette, pokies online, video poker, kilalao filokana ary ny lalao hafa izay matetika ny mpiloka dia misafidy amin'ny casinos samihafa ho an'ny mpilalao Australia. Mba hahafahantsika milaza izay tianay sy izay tsy tiantsika amin'ny tranokala AU kasino amin'ny Internet manokana ary afaka manome torohevitra momba ny seho tsara indrindra amin'ny Internet an-tserasera miorina amin'ny tranga izay ananantsika isika.
Best-tserasera Casino Aostralia dia manana ny tolotra
Rehefa nanapa-kevitra izahay ny hahita ny tsara indrindra ao amin'ny aterineto casino Australia dia efa nanolotra fotsiny izahay fa te hamonjy ny fotoana fotsiny ireo mpilalao. Mba tsy hilain'ireo mpitsidika ny tranokalanay ny hikaroka ny tranokalan'ny AU ao amin'ny aterineto izay mifanandrify amin'izy ireo indrindra, fa misafidiana ny iray amin'ny lisitra fa kosa manomboka mankafy ireo lalao lehibe avy hatrany. Ary na dia tsy mora aza ilay tetikasa, dia nifidy kazinina maromaro izahay, izay mifanentana amin'ny krizy indrindra.
Tsy sarotra ihany koa ireo fepetra nampiasainay. Voalohany indrindra dia nibanjina tsara ny kalitao sy ny habetsaky ny lalao ny casino rehetra ho an'ireo mpilalao Aostraliana. Ny fahasamihafana kokoa amin'ny slots, roulette, blackjack, video poker, pokies amin'ny aterineto, ary ny lalao casino hafa kokoa.
Avy eo, misy koa ny bonus. Tena zava-dehibe tokoa ny maha-betsaka azy ireo ary inona ny volany. Ireo tombontsoa azo antoka dia ny mahazo ny mpilalao rehefa tafiditra voalohany amin'ny casino an-tserasera ary tombony lehibe ho an'ny azo antoka. Saingy tsy tokony ho izany ihany no tsara tarehy. Ny karazana bonus hafa rehetra dia tokony hodinihina. Ary satria ny fampiroboroboana dia afaka manampy koa amin'ny fanatsarana ny bankrolls an'ny mpilalao izay efa nanamarina ny maha-izy azy ary na izy ireo dia miorina tsy tapaka. Tsy handany fotoana intsony
Tsy ilaina ny milaza fa ny iray amin'ireo zavatra manan-danja indrindra ho an'ny mpilalao dia mora ny mametraka ny vola any amin'ny casino ary manala ny vola avy amin'izany. Ny safidin'ny banky dia tokony ho samy hafa sy azo ekena ho an'ny mpitsidika ny tranokala tsara toerana amin'ny aterineto. Ary rehefa tonga amin'ny casinos amin'ny aterineto ho an'ireo mpilalao avy any Aostralia sy Nouvelle-Zélande dia tsy maintsy manana POLi e-wallet tena malaza izy ireo miaraka amin'ny karatra debit, karatra karta amin'ny lisitry ny lisitry ny fandoavam-bola amin'ny aterineto. Plus, ny fiarovana ny trosa rehetra dia tokony ho laharam-pahamehana indrindra amin'ny casino an-tserasera nofidianao.
Zavatra rehetra amin'izy rehetra ananantsika eto ny lisitry ny ambony aterineto tsara indrindra ho an'ny Aostraliana mpilalao trano filokana. Ary amin'izany hisy tsy ilaina ho anao ny mandany fotoana ny Internet ho ny tsara indrindra Casino toerana, satria afaka haka iray amin'ireo atolotsika ary mandany fotoana amin'ny toerana tena milalao ny lalao fa tsy. Mba hahatonga ny fikarohana vao mainka mety aminao no nampisaraka ny trano filokana ho sokajy izay ahitana ohatra ireo manana tombontsoa lehibe indrindra, izay manolotra safidy ny mivelatra ny aterineto pokies sy ny sisa.
Ny fampiasana ireo torohevitra ananantsika ao amin'ny tranokalanay dia afaka manomboka mandoa sy mahazo fandresena ao anatin'ny minitra vitsy. Ary satria ny ankamaroan'ny casinos dia manolotra dikan-teny amin'ny lalao ampifanarahana amin'ny Android sy koa ho an'ny iPhones sy iPads ireo lalao dia afaka milalao amin'ny fotoana rehetra sy amin'ny toerana rehetra raha mbola manana fifandraisana aterineto ianao.
0.1 Lisitry ny Top Sites 10 Africa Online Casino Sites
2.1 Famaritana fohy momba an'i Afrika Atsimo
2.2 Tantaran'ny filokana ao Afrika Atsimo
2.3 Lalao filokana any Afrika Atsimo
2.4 Mpanafika filokana any Afrika Atsimo
2.5 Fikambanan'ny Casino Casino Atsimo
2.6 Lalànan'ny filokana amin'ny aterineto any Afrika Atsimo
2.7 Karazana filokana any Afrika Atsimo
2.8 Ny vola azo avy amin'ny banky filokana any Afrika Atsimo
2.9 Fitsinjovana ny filokana ao Afrika Atsimo
2.10 Fitantanam-bola miloka an-tserasera amin'ny aterineto any Afrika Atsimo
2.10.1 Manaova banky an-tserasera
2.11 Bill Bill Remote Bill
2.11.1 Sarimihetsika tsara indrindra ho an'i Afrika Atsimo
2.11.2 Masinina fiara an-tserasera amin'ny casinos afrikana tatsimo
2.12 Sarimihetsika filokana ao Afrika Atsimo
2.13 Online Casino Aostralia
2.14 Best-tserasera Casino Aostralia dia manana ny tolotra
tokan-kintana momba ny bonus casino crek